ရိုဟင်ဂျာ သမိုင်းကို မသိသေးသူများအတွက် မျှဝေလိုက်ပါတယ် ~ Myanmar Express
Myanmar Express Posted in: မြန်မာ-ကုလား အဓိကရုဏ်းများ
10 June 2012 08:10
ကဲ .ခွေးလိုးမ ကုလားတွေ ဘာဆက်ပြောချင်သေးလဲ .. ခွေးလို အူ တတ်တဲ့ ငဒင် ကော ဘာပြောချင်သေးလဲ .. မ၇ှင်းတာ မေးလို့ရပါတယ်။
10 June 2012 16:45
Good News ၃ မိုင် ၄ မိုင်များတွင် တည်ရှိသော ရိုဟင်ဂျာ မူစလင်ရွာများရှိအိမ် အားလုံးကို ရွှေရခိုင် အုပ်စုတို့၏ မီးတိုက်ရှို့မှုကြောင့် အိမ်အားလုံးနီးပါးပြာကျသွားပြီး
10 June 2012 17:40
မွတ်စလင်ကုလားများကို မြန်မာ့မြေပေါ်မှ အပြီးတိုင်မောင်းထုတ်ပစ်ကြပါ။ မွတ်စလင်တွေကို ပြည်ဝင်ခွင့်ပေးနေသော လ.၀.က ကိုလည်း ပြင်းထန်စွာအရေးယူပေးကြပါ။
အခုကစပြီး ကုလားကိုသပိတ်မှောက်ကြပါစို့၊ ဒန်ပေါက်လည်းမစားနဲ့၊ ဆိတ်သားလည်းမစားနဲ့၊သူတို့စီးပွားရေးကိုသပိတ်မှောက်ကြပါစို့၊
11 June 2012 19:04
သိပ် စားချင်ရင် ၀က်သားဒန်ပေါက် လုပ်စားရမယ် (လုပ်ရောင်းသင့်တယ်)
11 June 2012 19:17
ဒန်ပေါက်လည်းမစားနဲ့၊ သိပ်စားချင်တယ်ဆိုရင် ၀က်သားဒံပေါက် လုပ်စားကြ လုပ်ရောင်းကြ ကုန်ကုန်ပြောမယ် ဘာပဲဝယ်ဝယ် ကုလားဆိုင် မ၀ယ်နဲ့
Nan Mon Mon Khin khin
Good idea. You are right.
11 June 2012 22:14
ဦးကိုကိုကြီးတစ်ယောက်ပဲ ၈၈မျိုးဆက်မှာ တိုင်းရင်းသားပဲထင်တယ်။ကျန်တာတွေအကုန်လုံးကုလားတွေပဲထင်တယ်။ဖယောင်းတိုင် ခောစငေါည တိုင်းရင်းသားတွေအတွက် လုပ်ပါအုံး။ရွှေတိဂုံဘုရားမှာ ရခိုင်လူမျိုးတွေ စီတန်းလှည့်လည်တော့ ၈၈မျိုးဆက်တစ်ယောက်မှ မတွေ့ပါလား။၈၈မျိုးဆက် ကုလားမြအေး ကတော့ ခင်ဗျားတို့ထက် ပိုသာတယ်။RIGHT . He is always stand at his people kalar side.he isapatriotic man.
်အဲ့ဒီ ကုလား(ခေါ်) ခွေး ၀ဲစားတွေကို တန်းစီပြီ ထိပ်ကိုလီးနဲ့ သာ ခေါက်လိုက်ကြရအောင်
WE MUST DO WAR WITH THEM.
ဒါ သိပ် ကောင်း တဲ့ တုန့် ပြန် မှု ပဲ။ ထောက် ခံ တယ်။ ကျွန် တော် လဲ ဒီ အ တိုင်း ပဲ လုပ် ခဲ့ တယ်။ နောင် လဲ စွဲ စွဲ မြဲ မြဲ လုပ် သွား မယ်။
HA HA !!!!!! Like that article so very much.I wish Daw Su is the President in this situation. And want to see how that devil lady handle this issue. She might say " oh..oh.. calm down ( burn down) ko ko Rohin..g.a".... Pls... leave this portion for me...take the western area of "BURMA", I give it to you for Humanitarian ground...."""""""""Dam... Su Kyi...Politicizing the Rohinga issue was one of her tactic..Now , she just shut her big mouth up. Even prepare to go abroad to celebrate her big reunion with her ex--------.
12 June 2012 22:38
Kill them all Muslim ...
ငါတို့ တိုင်းရင်းသားရခိုင်ပြည်နယ်ထဲကို ရိုဟင်ဂျာတွေ ဘယ်လိုနည်းရောက်လာတာလည်းဆိုတာ သေချာဆန်းစစ်ကြည့်ပါမြန်မာပြည်အရေး တွေးကြည့်ရင် ရင်လေးစရာကြီးပဲငါတို့ မြန်မာပြည်သားတွေ အမျိုးသားရေးကို ရှေ့တန်းတင်ပြီးအလုပ်လုပ်ဖို့လိုတယ်
14 June 2012 21:35
16 June 2012 17:57
ယင်း သ မိုင်း ကို ထောက် ခံ တယ် ခွေး ဗမာ တွေ ငါတို့ ရိုဟင်၈ျာ လောက် အဆင့်မ ရှိဘူး ခွေးတွေ
23 June 2012 05:27
ma ae lo kalar. dwe.. nga do naing nyan ko sor gar dae PostaComment